Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Fibreerka Fiber Optical | Shiinaha Fiber optical gudbiye Factory
Mini Gudbiye gudbiye (ZTX1310M / ZTX1550M)
Sharaxaadda alaabada CATV Model ZTX1310M / ZTX1550M Kanaalka gudbiyaha CATV VSB / AM iskuxirka fiidiyowga wuxuu bixiyaa xal heer-sare ah oo loogu talagalay gudbinta tayo sare leh ee CATV. Model ZTX1310M / ZTX1550M waxay bixisaa xawaaraha analogga ah ee caadiga ah laga bilaabo 45 illaa 1000MHz oo u oggolaanaya gudbinta dhammaan koox-hoosaadyada, hooseeya-band, FM, dhexda-dhexda, iyo kanaalada band-sare. Astaantani waxay u oggolaaneysaa nidaamka inuu u gudbiyo macaamiisha loogu talagalay adeegyada fiidiyowga ah. Iyadoo lala kaashanayo VCR, kaamirada fiidiyowga, ama quudinta telefishanka, qaabka ZTX1310M / ZT ...
Sharaxaadda alaabta ZTX1800 waa nooc heer-sare ah oo wax-qabad heer sare ah oo 1550nm ah oo wax ka beddelaya qalabka wax lagu beddelo ee wax-qabadka sarreeya oo leh wax-qabad sarreeya oo koronto ku beddelaya. Dhammaan ilaha iftiinka unugga oo dhami waxay qaadanayaan xawaaraha cidhiidhiga ah, buuqa yar, mawjadaha joogtada ah ee loo yaqaan 'DFB laser', taas oo macquul u ah yareynta saameynta faafitaanka. Sababtoo ah qaadashada astaanta caalamiga ah ee qaybaha muhiimka ah iyo tikniyoolajiyadda xakamaynta nidaamka shirkadeena, tiknoolajiyada xakamaynta shabakadda SMNP, farsamada mashiinka ...
1310nm Fibreeriyaha Fiirsada (ZTX1310)
Sifeynta sheyga ZTX1310 taxanaha 1310nm gudbiyaha muraayadaha waa nooc gudbiye muuqaal oo tayo sare leh oo leh shaqada AGC. Dhererka gudbiyaha waa IU, waxaa lagu dhejin karaa 19ka jir si ku haboon. Qalabka ugu muhiimsan wuxuu qaataa AOI, EXSTON ama Ortel DFB buuq hoose oo ay kujiraan qaboojiye heerkul-koronto, leer joogto ah. Dhammaan tusayaasha waxqabadka farsamadu waxay gaadhaan heerka qalabka la soo dejiyo ee la midka ah, oo keenaya gudbinta masaafada dheer ee tayada sawirrada, tirooyinka ama isku riix ...
1310nm Saldhigga Muuqaalka indhaha (ZTX1310R)
Astaamaha 1 Waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu kordhiyo shabakadaha isku xirnaanta. Waxay leedahay laba hawlood: hawl qabashada, si loogu beddelo qalabka wax lagu aqbalo; gudbinta shaqada, awoodda wax soo saarka 2 ~ 4mW, oo loo isticmaali karo in lagu bixiyo 1 ~ 4 node indhaha. 3. Isticmaalka banaanka, guriyeyn aan biyo fiicneyn, oo ku shaqeyn kara heerkul aad u xun sida -45 ° C ~ + 85. Qaybta Farsamaynta Halbeegga Halbeegga Halbeegga Feejignaanta Qaybta Hesho Awoodda Aragtida dBm -6 ~ + 2 (caadiga -1) Dekedaha wax soo saarka lambarka 1/1 ama 2/0 ...
Qalabka gudbiyaha indhaha (ZTX1310W)
Astaamaha 1. Waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu dheereeyo shabakadaha isku-xirnaanta. 2. Waxay u shaqeyn kartaa labadaba node iyo gudbiye yar yar si ay u bixiso 1 ~ 4 node. 3. Qaabka banaanka, wuu shaqeyn karaa -45 ~ + 85 ℃. Qiyaasaha Halbeegyada Halbeegyada Halbeegyada Aqbalaada Wax Soo Saarka Lambarka 1/1 2/0 0 Bandwidth Shaqo (MHz) 47 ~ 862 Wavelength (nm) 1310/1550 Homo Noise Current 7 Input Power (dBm) -6 ~ +2 Caadiga ah -1 Fiber Connetor FC / APC Ama SC / UPC Khasaaraha Soo Laabashada Aragtida (dB) ≥40 Loss Soo Celinta RF (dB) ≥16 Unflatne ...
1550nm Dhexdhexaadiyaha Isbadalka Gudaha (ZTX1550)
Sharaxaadda alaabada ZTX1550 taxanaha 1550nm gudbiyaha muraayadaha waa nooc ka mid ah qalabka gudbinta indhaha ee CATV. Dhererka gudbiyaha waa IU, waxaa lagu dhejin karaa 19ka jir si ku haboon. Qalabka ugu muhiimsan wuxuu qaataa Ortel, MITSUBISHI DFB buuq hoose oo ay kujiraan qaboojiyaha heerkulka, leer joogto ah. Dhamaan tilmaamaha waxqabadka farsamadu waxay gaarayaan isla heerka qalabka la soo dejiyo, oo keenaya gudbinta masaafada dheer ee tayada sawirada, tirooyinka ama calaamadaha dhijitaalka ah ee la cadaadiyo ...